lundi, 20 janvier 2020 21:24
Tafika Malagasy: Havaozina sy hasiana fanitsiana ny rafitra
Tonga nanokatra ny atrikasa izay ataon'ireo tompon'andraikitra ambony eo anivon’ny Tafika Malagasy, teny amin’ny CCI Ivato ny Praiminisitra, Lehiben’ny governemanta, Ntsay Christian androany. Dinikasa entina manatanteraka ny rindran-damina amin'ny fanavaozana ny rafitry ny Tafika, izay natrehin'ireo mpikambana eo anivon'ny governemanta voakasika amin'ny sehatry ny fandriampahalemana.
lundi, 20 janvier 2020 19:43
Iavoloha: Fihaonana tamin'ny mpanao gazety
Iavoloha: Fihaonan'ny mpanao gazety, ny tonian-dahatsoratra, ny tompon'ny orinasan-gazety tamin'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina teny amin'ny lapa-panjakana Iavoloha ny alatsinainy 20 janoary 2020.
lundi, 20 janvier 2020 13:50
Governemanta: Nanamafy ny filoha Rajoelina fa hisy ny « remaniement »
Ho feno herintaona amin’ny 24 janoary ny nananganana ny governemanta izay mifamatotra amin’ny « contrat-programme ». Nampitahain’ny filoha Andry Rajoelina amin’ny ekipa baolina kitra ny zava-misy, misy ny nahomby, tao ny reraka ambony ihany, tao ny tsy afaka raha nihaona tamin’ny mpanao gazety teny amin’ny lapam-panjakana Iavoloha izy androany.
Nohamafisiny fa hisy ny fanovana ny Governemanta ary anatiny tanteraka amin’ny fanaovana tombana sy fijerena ny asan’ireo minisitra izy amin’izao fotoana izao.
lundi, 20 janvier 2020 10:56
« Pompiers » Tsaralalàna: Natsahatra amin’ny asa ny « Chef de corps »
Tsy fandraisana andraikitra manoloana ny voina nitranga teny Avaradoha, nateraky ny tany nihotsaka no nandraisan’ny Ben’ny tanànan’Antananarivo, Naina Andriantsitohaina, fepetra nampitsahatra avy hatrany tamin’ny asany ny « Chef de corps » miandraikitra ny « Pompiers ».
lundi, 20 janvier 2020 10:33
Mahajanga: Miaritra fahatapahan’ny herinaratra ireo be antitra maka vola fisotroan-dronono
Mikatso ny fizarana vola fisotroan-drononon’ireo be antitra mandray izany amin’ny Cnaps eto Mahajanga vokatry ny fahatapahan’ny herinaratra tamin’ity maraina ity. Tsy manan-tsafidy ireo zokiolona fa dia miaritra, na dia efa nisy namonjy filaharana vao maraina aza.
lundi, 20 janvier 2020 10:19
FFKM: Dr Rakotonirina David, filohan’ny FLM indray no mitarika
Tontosa omaly ny famindram-pitantanana ny Fiombonan’ny Fiangonana Kristianina eto Madagasikara na FFKM, ka ny Pastora Dr Rakotonirina David, filohan’ny Fiangonana Loterana Malagasy na FLM indray no mitarika mandritra ity taom-piasana 2020 ity, nandimby toerana an’i Irako Andriamahazosoa Ami, mpitandrina, filohan’ny foibe Fiangonan’i Jesoa Kristy eto Madagasikara na FJKM.
Ifandimbiasan’ireo filoham-piangonana efatra mandrafitra ny FFKM ny fitantanana isan-taona.